China imbwa bhegi fekitori uye vagadziri | Radar
Pla Cling Kuputira
Musha Shandisa Cling Kuputira
Yekutengesa Shandisa Cling Kuputira
PLA Yakakwira Transparency Firimu
PLA Tambanudza Firimu
Imbwa bhegi mabhegi
PLA Mukombe muvharo
Biodegradable PLA Cling Kuputira
imbwa bhegi bhegi
100% Biodegradable & Compostable, chaiyo eco-hushamwari, hapana kukuvadza kune zvakatipoteredza, inogona kunyatso kushatiswa kuita H2O uye CO2 munzvimbo dzeindasitiri yekuumba manyowa mukati memazuva zana nemakumi masere.
Biodegradable PLA Imbwa Poop Bhegi
23cm * 33.5cm 17 micron
1 ruvara 1side kudhinda
A: 100% Biodegradable & Compostable, chaiyo eco-hushamwari, hapana kukuvadza kune zvakatipoteredza, inogona kunyadziswa zvizere kupinda H2O uye CO2 mumaindasitiri ekugadzira manyowa mukati memazuva zana nemakumi masere.
B: Usage: Kicheni Kushandisa. Microwave kudziyisa, firiji kuchengetedza chikafu, nyowani uye yakabikwa chikafu kurongedza uye dzimwe nguva zvinoshandiswa zvakanyanya mudzimba, supamaketi, hotera uye maindasitiri ekupakata chikafu munda.
C: Sevhisi: Kune akapedza zvigadzirwa, isu tinopa kwenguva yakareba zvirongwa zvinoita kune chero mhinduro mutengi angave ave; kune yakagadziridzwa zvinhu, isu tinopa mushure-kutengesa tekinoroji basa kuve nechokwadi chekubudirira kwekugadzira.
A, Hunhu kuvimbiswa：
Tine hunyanzvi QA system yekuona mhando yemidziyo yedu yakawanda, kubva pane zvakasvibirira kusvika kumagumo zvigadzirwa.
B, Yepamberi tekinoroji:
Ramba uchivandudza tekinoroji panguva yekugadzira, isu tinogona kuburitsa yepamusoro PLA mafirimu;
C, Nyanzvi timu:
Isu takasarudzika muPLA zvigadzirwa zvine hukama kweanopfuura makore gumi, yekugadzirisa mbishi, kugadzira yakapedza zvigadzirwa zvePLA, kuchengetedza zvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro uye basa.Kubva kune mahunyanzvi timu kune timu yekutengesa, takatsaurira kupa yakanakisa-yakagadziriswa biodegradable mhinduro kune vese vatengi mumaindasitiri akasiyana.
Isu tine zvitupa zvine chekuita nezve zvigadzirwa zvedu, kuratidza kuchengetedzwa kwezvigadzirwa zvedu pamwe nekuratidza kutendeka kwedu, senge FDA, EN13432, ASTM D6400, BPI, nezvimwe.
Zvinorevei ne100% Inokwenenzverwa?
100% inogadzikana zvinoreva kuti zvigadzirwa zvePLA zvinowedzerwazve zvizere. Inogona kushandurwa kuti ive monomer uye polymer, kana, inogona kuve yakasanganiswa kuita mvura, kabhoni dhayokisaidhi uye zvigadzirwa zve organic. PLA inonyanya kugadzikana pane yakajairwa peturu yakaitwa epurasitiki.
Zvinotora nguva yakareba zvakadii kugadzirira manyowa ePPL zvigadzirwa?
Kazhinji, PLA inozadza manyowa zvachose mukutengesa manyowa mune angangoita mazuva makumi matatu nemakumi mana nemashanu. Mumabhini ekuumba manyowa anogona kutora nguva yakareba.
Ko PLA manyowa mumarara angu anogona here?
Zvigadzirwa zvePLA zvinoda imwe huwandu hwekupisa, hunyoro uye mweya kune kompositi. Zvinosuruvarisa kuti marara ekurasa marara haana mamiriro ezvinhu akakosha uye zvinhu zvinoraswa mumarara zvinowanzoperera munzvimbo idzi dzekurasa. Zvakare, nzvimbo dzekuviga marara dzinowanzo simbiswa izvo zvinoreva kuti kuora kunoitika pazasi pechinhu uye izvo zvinokandwa mumarara zvinogona kuchengetedzwa kwemakumi emakore apfuura.
Ndezvipi zvinodiwa zvekuchengetedza zvePLA?
PLA inofanira kuchengetwa kunze kwezuva rakananga uye munzvimbo inotonhorera, yakaoma. Chengetedza zvigadzirwa zvePLA pasi pekupisa kwema 110 degrees (F) uye pazasi pe90% humidity nguva dzese.
Ndinofanira kubata sei zvigadzirwa zvePLA panguva yekufambisa?
Chengeta zvigadzirwa zvePLA munzvimbo dzinotonhorera, dzakaoma pamwe netembiricha isingambodarika 110 degrees (F). Kunyangwe zvisiri kudikanwa, firiji rori inokurudzirwa zvakanyanya mukutakura zvigadzirwa zvePLA.
Ndinogona here kushandisa PLA zvigadzirwa zvezvinwiwa zvinopisa?
Ehe, kana tembiricha yechinwiwa isingadariki 110 degrees (F). Zvigadzirwa zvePLA zvinoita zvirinani kana zvichishandiswa nezvinwiwa zvinotonhorera kunyangwe hazvo kupisa kushivirira kwezvirimwa zvePLA kuri 110 degrees (F). Isu tine CPLA kofi yemukombe inovhara kupisa kuti ifananidze kapu yemukombe iyo inogona kushandiswa muzvinwiwa zvinopisa.
Ndeipi yepakati mutengo wePLA uchienzaniswa nezvakajairwa zvigadzirwa zvepurasitiki?
Ivhareji yemutengo inoenderana neiyo mhando, mhando, uye saizi yeodhi. Zvakadaro mutengo uchienzaniswa nezvigadzirwa zvepurasitiki zvakajairika zvave kukwikwidza zvakanyanya sezvo kufarira kwechigadzirwa chinogadziriswa zvigadzirwa kuchikwira. Iko kusarongeka kwemitengo kuri nezve 15 +%.
Zvigadzirwa zvePLA zvakachengeteka kudya here?
Zvigadzirwa zvePLA hazvidyike asi kazhinji hazvisi zvine chepfu. Zvidimbu zvidiki zvePLA zvinowanzo pfuura zvisingakuvadzi kuburikidza nemudumbu wemudumbu. Kamwe ikapfuura nemudumbu remudumbu inozobviswa muchitsiko. Ndokumbirawo ubvunze chiremba kana kurwadziwa kana kusagadzikana kukamuka.
Ini handigadzikane nechibage; ndaigona here kushandisa zvigadzirwa zvePLA?
Hongu, kupisa kunoshandiswa mukuwana starch kubva muchibage kunoparadza immune immune proiilin. Profilin ndiwo mushonga uyo unowanzo kukonzera kusagadzikana uye hauna kuwanikwa muzvigadzirwa zvePLA.
Pashure: Mapepa Kucheka
Zvadaro: Kicheni Tsvina bhegi
Biodegradable Imbwa Poop Bhegi
Biodegradable Doggie Poop Bhegi
Compostable Imbwa Poop Mabhegi
Mabhokisi Anogadzikana eDoggie Poop
Kero:Kuvaka 4, Santang Industrial Park, No. 338, Jiuhua North Road, Wuhu, Anhui,
Eco Cling Kuputira Shuga Kuputira, Biodegradable Compostable Marara Mabhegi, Compostable Bags, Biodegradable Cling Kuputira, Compostable Garbage Bags, Biodegradable Inotambanudza Firimu,